Iqala kanjani i-tsunami | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-tsunami e-Indonesia, ngo-2004
Amagagasi amakhulu, lawo kwesinye isikhathi avela ngemuva kokuzamazama komhlaba okucekele phansi, abukeka njengokuthile okuvela kumabhayisikobho we-apocalyptic. Lo mkhuba wesimo sezulu ubanga umonakalo omkhulu ogwini, ethatha konke okusendleleni yakhe.
Namuhla sizobona ukuthi i-tsunami iqala kanjani, kanye namazwe lapho asengozini enkulu yokuba yizimo "ezikhethiwe" zamagagasi etheku, njengoba aziwa eJapan.
Ama-tsunami angamagagasi amakhulu angaba phakathi 7 namamitha ayi-33 Mude. Kwesinye isikhathi kuvela ngemuva kokuzamazama komhlaba, okungenzeka kudalwe ukuzamazama komhlaba noma ukuqhuma kwentaba-mlilo. Lapho ukuzamazama komhlaba kushibilika phansi kolwandle, amanzi angaphezulu anyuka ngamamitha ambalwa, aqonde ngasogwini futhi athinte umhlaba.
Lezi yizimo okuthi, ngenxa yokucekelwa phansi kwazo, ososayensi banethemba lokuthi bazokwazi ukuzivimbela kusengaphambili, ngoba namuhla kusenzima kubo. Noma kunjalo, ngenxa yokuthuthuka okusheshayo kobuchwepheshe, basondela kakhulu ekufinyeleleni kubo. Bayisebenzisela yona izingcwephe, okurekhoda izici ezahlukahlukene (umfutho nobude besikhathi, phakathi kokunye) kokundindizela komhlaba okwenziwe ukuzamazama komhlaba; kanye ne iziphuphutheki zesikhala kukhombisa izithombe zezilwandle.
Isithombe: Administration National Oceanic and Atmospheric (NOAA)
Amazwe lapho kuvela khona ama-tsunami amaningi yilawo atholakala endaweni ebizwa nge-Pacific Ring of Fire, okungukuthi, ku: Japan, Australia o IHawaii. Emazweni afana nelakithi, iSpain, ubungozi buphansi kakhulu, kepha-ke, nathi siyakhululwa engozini: ngoNovemba 1, 1755 uCádiz noHuelva bathola imiphumela yegagasi elibi elashiya Abangu-1240 bashonile, ngemuva kokuzamazama komhlaba phakathi kuka-8 ​​no-3 esikalini sikaRichter esashayisa iLisbon. Kuyiqiniso ukuthi sekudlule iminyaka engaphezu kwamakhulu amabili kusukela lesi sehlakalo esibi, kepha ngenxa yemiphumela emibi ye-tsunami, ososayensi banethemba lokuthola uhlelo lokuxwayisa ukheshi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iqala kanjani i-tsunami
u-maryel morales kusho
Ngiyayithanda, kepha ngiyaswela ukuthi zivela kanjani akukho abathi izindawo ezenzekile azingiqinisekisi kangako kepha kungisizile ukuthi ngikubonge kakhulu
Phendula kumaryel morales